> Resource > Beddelaan > Video inay Flash Encoder - Beddelaan Video inay Flash
Wondershare Video inay Flash Encoder waa video aad u fiican in flash Converter si loogu badalo video in ay Jabbuuti ama FLV. Iyada oo ay taasi flash video encoder, aad u bedeli karaan wmv, AVI, MPEGMPG, 3GP, MP4, MOV, mod, TOD (JVC Vidicon), MKV in Flash, xitaa badalo HD video sida M2TS, TP, TRP, TS u iftiimiyo FLV / Jabbuuti hawlo badan oo ku lifaaqan.
1 Import video ama DVD files
Guji "Add Files" button in lagu daro dhammaan noocyada kala duwan oo ay ku jiraan video SD video iyo HD video dhammaan qaabab loo jecel yahay. Oo guji "DVD Load" in ay ku shuban filimada DVD ka DVD-Rom, DVD Folder, files ISO in la beddelo si Flash format.
Midig u guji kasta oo video laga keeno si ay u doortaan "Edit" khiyaar qalabka tafatirka video aad video keenaan heerka ku xiga. Waxaad arki doontaa sida loo noola video, qabsato video saamayn, ku dar watermark iyo Cinwaan adigoo samaynaya soo socda.
Dalagyada Video : Waxaad resize kartaa file video ee "Dalag" tab. Hel size doonayo ee video by zooming, waxayna jiidayeen jir dalagga ama dejinta xuduudaha la xiriira. Dheellitir video saamayn : Waxaad codsan kartaa qaar ka mid saamayn gaar ah si ay video ka. Marka aad u samayn, waxaad ka heli doontaa eegis ku ogaado saamaynta video ka hor iyo ka dib la qabsado oo la laba-waqtiga dhabta ah muraayadood previewing. watermark Edit : Haddii aad rabto in aad hesho a shakhsi flash video ay ku daray macluumaad qaar ka mid ah waxaa sida watermark, aad awooddo oga ay ku daray labada macluumaad image text ama. Waxaad xaq u leeyihiin inay resize qoraalka / image ku daray. Ku dar fur-in Cinwaan : Haddii aad heshay videos qaar ka mid ah oo leh fur-in u dhiganta file Cinwaan (sida caadiga ah qaab SRT), waxaad ku dari kartaa Cinwaan in ay video ka hooseeya ku jira "Cinwaan "tab.
3 Samee goobaha diinta
Next, xulo qaab ka mid ah liiska qaabka wax soo saarka hoos-hoos. Qaabab Flash sida FLV, Jabbuuti, F4V iyo YouTube, vimeo si buuxda taageeray. Waxa kale oo aad qabsato karaa goobaha audio / video sida ay door bidaan adigoo riixaya "Settings" ikhtiyaar aad. Laakiin waxaa wanaagsan in ay sii goobaha defaulted.
4 Start video inay diinta ka flash
Ugu dambayn, guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan badalo video ah laga keeno si Jabbuuti, FLV iyo qaab kasta oo la soo xulay. A screen horumarka diinta la soo bandhigi doonaa inta ay socoto meesha aad ku eegaan karo video ah. Users nidaamyada gaabis ah u badan tahay in ay doonayaan inay gab Xiisaha sida u adeegsanayaa wareegyada processor ka badan.
Beddelaan videos in FLV & Jabbuuti Flash files
Beddelaan videos inay ukala uploading online: Si toos ah loogu badalo videos in ay Jabbuuti iyo FLV flash videos si aad u wadaagi kartaa YouTube, aad blog shakhsi, MySpace, Google video, iwm
SD Taageero iyo HD videos: Dhammaataan badalo labada SD iyo HD videos in ay Jabbuuti iyo FLV videos flash oo ay ku jiraan AVI, mod, TOD, MP4, MPEG / Mpg, wmv, 3GP, MOV, MKV, DV, H.264, iyo M2TS, TP , TRP, TS, iwm
Diinta Dufcaddii: Time-badbaadinta diinta Dufcaddii kuu ogolaanayaa inaad badalo badan video files waqti.
Flash Edit videos la shaqayn tafatirka awood badan
Flash Edit video leh tafatirka gaar ah si ay noola, qabsato video saamayn, ku dar watermark iwm
Clip video by tageynaa mid video galay qaybaha kala duwan.
Midowdo badan video clips galay mid ka mid file.
Ku biir badan video clips galay mid ka mid slideshow.
Laba daaqadaha Falanqeynta waqtiga dhabta ah ha aad ka heli saamaynta video ugu fiican ee ka mid ah filimada aad
Howlgal Easy iyo update automatic
Si toos ah loo ogaado nooca ugu dambeeya markasta version cusub si loo sii daayo.
Siiyaan o-line 7X24 saacadood e-mail taageero farsamo.
Sida loo Beddelaan M4V in wmv